Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKaty
Ekugqibeleni phumla, uzipholele, uqubhe okanye wenze imidlalo efana nale Umzekelo ukukhwela ibhayisekile, ukutyibilika emgqeni, ukukhwela intaba okanye imidlalo yasemanzini, yonke into inokwenzeka. Emva koko sinento yakho, ikhaya leholide yonke kuwe wedwa. Ikhaya lethu elisandula ukwakhiwa (ngoMeyi 2020) leeholide eliphangaleleyo likwindawo ezolileyo ngokuthe ngqo kwiLake Hainer kwaye ingekude nemetropolis yaseLeipzig (20 km).
Wamkelekile kwi-Hainer See.
Ukongeza kwindawo entle kakhulu kunye nombono omangalisayo phezu kweLake Hainer, ikhaya lethu leeholide elinikezelwe ngokukhululeka liyachukumisa ngezixhobo zalo ezikumgangatho ophezulu kunye neenkcukacha ezininzi zothando.
Kukho amagumbi okulala ama-3 aneebhedi ezimbini kunye negumbi lokuhlambela.
Ikhitshi eqaqambileyo, yanamhlanje enetafile enkulu yokutya kunye nethafa elinelanga, isidlo sakusasa ngaphandle, kumema ukuba uhlale.
Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngomatshini wokuhlamba izitya, umatshini wekofu, itoaster, ifriji, njl.
Eyona nto iphambili kwikhaya lethu leeholide yi-sauna ekumgangatho ongaphezulu, indawo yokuphumla epholileyo enesofa, ekumema ukuba ukonwabele iTV entle kunye nemidlalo yangokuhlwa kunye nosapho okanye nabahlobo, kunye nethafa elihle eluphahleni onokuthi ukonwabele ukutshona kwelanga. ngokupheleleyo.
Indawo yegadi inendawo yebarbecue enegrisi yebarbecue kunye nendawo yokuhlala erustic
Ibhedi kunye neetawuli zibandakanyiwe. Nceda uze nezakho iitawuli zaselwandle.
Siyathemba ukuba kungekudala siza kukwazi ukukwamkela kwikhaya lethu leholide elisandula ukwakhiwa kwaye sikunqwenelela ixesha elimnandi nelokuphumla eLake Hainer.
Umbuki zindwendwe ngu- Katy
Zihlole usebenzisa ibhokisi yesitshixo.